Sardinia Photoreal DOWNLOAD FSX & P3D part1 - Rikoooo
အရွယ် 1.71 GB ကို
downloads ရယူရန္ 63 755
၏စာမကျြနှာမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည် ကျိကျိတက်ရှုခင်း အဘို့ (Corsica ၏နှမအီတလီနိုင်ငံမှပိုင်ဆိုင်) Sardinia ၏ FSX or Prepar3D v1 နှင့် v2 Rikoooo နေဖြင့် download ပြုလုပ်မရရှိနိုင်ပါနှင့် FSET နှင့်အတူ Diego မှ Paparella အားဖြင့်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဒါကရှုခင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စုစုပေါင်း4GB ကိုထက်ပိုပြီး, မျှမျှတတတသမတ်တည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာက၎င်း၏အရွယ်အစား5အစိတ်အပိုင်းများကိုခွဲခြားသည်။4အစိတ်အပိုင်းများသည်၎င်း၏တခုလုံးကို Sardinia ကိုယ်စားပြုသည်။
"အောက်ပါအားဖြင့် Rikoooo အပေါ်ရရှိနိုင် FS2004 ဘို့ Sardinia တစ်ဦးရှုခင်းကိုလည်းရှိပါတယ် ဒီ link."
Raimondo Taburet အားဖြင့်တစ်ကွက်လောဒမွို့ 12 (10m တိကျမှန်ကန်မှုကိုမြင့်ဒေတာ) နဲ့လာပါတယ်။ (ဂြိုဟ်တုဖြင့်ရရှိသော) photo-ကိုမှန်ကန်ပုံရိပ်တွေ LOD14 နှိုင်းယှဉ်ဘို့အ 2.38 မီတာ / pixel ကင်မရာ, သတင်းအချက်အလက်ဖြစ်ပါတယ်နေကြတယ်, HD ကို payware ၏ရှုခင်းရုပ်ပုံများ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ "VFR ပြင်သစ်" လောဒမွို့ 15 ဖြစ်ကြသည်။ ဒီရှုခင်းနှင့်အတူထည့်သွင်းလှပတဲ့ကမ်းရိုးတန်းလမ်းကြောင်းနှင့်ကမ်းခြေဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါရှုခင်း FPS ဖော်ရွေသည်နှင့်အပြင်, အများဆုံး configurations အပေါ်ချောချောမွေ့မွေ့ပြေးလိမ့်မည်, ကအရည်နှင့်အပြတ်သားသည်။
ဤသည်ကို download အလွန်လေးလံသောဖြစ်ပါတယ် 1.71 GB ကို သင်တစ်ဦးမဟုတ်လျှင် ဂျမ်ဘို အဖွဲ့ဝင် .. ဒီရှုခင်းကို download လုပ်ပြီးနောက်,3အရပ်သို့ခှဲဝေခဲ့သည် download, နာရီအနည်းငယ်စောင့်ဆိုင်းမျှော်လင့် ဖိုင်တွဲတစ်ခုသို့အရာအားလုံးကိုဇီပ်နှင့်အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ sardinia_photoreal_part1အလိုအလျောက် installation ကိုစတင်ရန် .exe.
ဒီအပိုငျးကိုအောက်ပါဧရိယာများပါဝင်သည်: ကော်စတာ Smeralda, Olbia (LIEO လေဆိပ်နှင့်အတူ), Arzachena, San Teodoro, Tempio Pausania, Asinara ၏ပင်လယ်ကွေ့, la Maddalena ။
အောက်တွင်, ဒီအပိုင်း4ဖြင့်ဖုံးလွှမ်းဧရိယာအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်တပြင်လုံးကိုရှုခင်း (1 အစိတ်အပိုင်းများ) ကဖုံးလွှမ်းဧရိယာဖြစ်ပါတယ်။
အပြီးအစီးရှုခင်း ရှုခင်းအစိတ်အပိုင်း 1 (ဒီကို download)
(အီတလီ: Sardegna, အဘိဓါန် Sardinian Sardigna) Sardinia မြေထဲပင်လယ်တွင်ကျွန်းတစ်ကျွန်းနှင့်အီတလီဒေသ, တူနီးရှား၏မြောက်ဘက်နှင့် Corsica ၏တောင်ဘက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူမသည်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ status ကိုဖေဖေါ်ဝါရီလ 28, 1948 လက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ၎င်း၏မြို့တော် Cagliari ၏မြို့ဖြစ်ပါတယ်။
Sardinia အဘယ်သူ၏အရာရှိတနာမကိုတိုင်းဒေသကြီး Autonoma della Sardegna သည်အထူးအဆင့်အတန်းနှင့်အတူ၎င်း၏မျက်နှာပြင်အားဖြင့်မြေထဲပင်လယ်အတွင်းဒုတိယအကြီးဆုံးကျွန်းတစ်အီတလီဒေသဖြစ်ပါတယ်။ အ 1948 ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာပြဌာန်း၎င်း၏အထူးအဆင့်အတန်းသည်၎င်း၏ဘာသာစကားနှင့်ပထဝီအင်္ဂါရပ်များကဒေသခံ tutelary အဖွဲ့အစည်းများ၏အုပ်ချုပ်ရေးကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုအာမခံ။
Bonifacio ၏ရေလက်ကြားအားဖြင့်ကွဲကွာ Sardinia, Corsica အနောက်ပိုင်းမြေထဲပင်လယ်အလယ်၌တည်ရှိသည်: စီးပွားရေး, စစ်ရေးနှင့်မဟာဗျူဟာအဖြစ်ရှေးခေတ်ကုန်သွယ်ရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးများကတည်းကမျက်နှာသာဗဟိုအနေအထား။
ခေတ်သစ်ကာလ၌များစွာသောစာရေးဆရာတစ်ဦးကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရှုခင်းအတွက်ကမ်းရိုးတန်းခရီးသွားလုပ်ငန်း၏ extension ကိုနေသော်လည်း, Nuraghic ယဉ်ကျေးမှုအကြွင်းအကျန်နေတုန်းပဲဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသော Sardinia ၏ဂုဏ်အသရေ, extolled ကြပြီ။ (ဝီကီပီးဒီးယား)